သီချင်းစာမျက်နာ ၅Oct 4, '11 1:39 AM for everyone
သီချင်းစာမျက်နာ ၁ သီချင်းစာမျက်နာ ၂ သီချင်းစာမျက်နာ ၃ သီချင်းစာမျက်နာ ၄ မိုးတိမ်ကဗျာ ဆို- ရသ + နီနီခင်ဇော်.
Bye Bye ဆို - Lit Star ft - Shwe Htoo
၀မ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ ဆို - Idiots
( နောင်တစ်နေ့တော့ ) ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ် ကာရံလေး ခဏလောက်တော့ ဝေးဝေးနေမယ် အစဉ်ပြေပါစေ
မောင့်ချစ်သူ Never To Never အိမ်မက်ကမ္ဘာ ပြန်လာခဲ့ပါ(၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း)
အချစ်နဲ့အလွမ်း တေးဆို ၀ိုင်းစု
က မင်းတစ်ယောက်ထဲ ( MHL )
နာရီတွေရပ်ထားမယ် ( ကောင်းကောင်း )
(နွေရဲ့ အလွမ်း) ရေး/ဆို=ကိုသားညီ(ဥသျှစ်ပင်)
တစ်ဖတ်သက်ရုပ်ရှင် ( ဒိုရေမီ )
ညီမလေး ဟုတ်လို့ လား
ဥမ္မာလီဇာ ( ဘန်နီဖြိုး )
အချစ်ရဲ့သိချက်(4)ရပ် ( ဇေရဲ၊အာကာစမ်း တယ်လီဖုန်း ( ဘန်နီဖြိုး )
သတိရညနေခင်း ( ရဲလေး၊ဇေရဲ၊ကျော်ထွဋ်ဆွေ)
သင်ခန်းစာ(Jme and irine)
ကိုယ့်အရစ်ဆုံး(ဘန်နီဖြိုး၊ကိကိ၊မေကြည်ဖြူ) အရေးကြီးတယ် (snare)
because of you (kelly clarkson) အမှတ်တရအနမ်း (ဇေရဲ)
တိတ်တခိုး ( ထက်ထက်၊ရဲလေး)
ဘိုကေ(လွှမ်းပိုင်) မဝေးတော့ဘူးထင်တယ် Zwe Gyi နဲ့ လွှမ်းပိုင်
တစ်ယောက်ထဲပဲချစ်မယ် (ဟဲလေး၊ tinzarnwewin)
လက်လက်ကိုထလို့ (bobby soxer )
( အိုးလေးကွဲသွားပြီ )ဟသသီချင်း
MC ဝေလင်း ရဲ့ကလေးလေးရယ်
noung yar kaot mar jam by sai soon hai
(ပြည့်စုံလွန်) မုန်းမုန်းမေ့ဖို့ခက်တယ် (စိုင်းစိုင်း ၊ မိုးမိုး)
မီးအိမ်ရှင် သူငယ်ချင်းအချစ် ပြန်ခဲ့ အရှုပ်တော်ပုံ
(သို့မ)
ပေးသလောက်ပြန်မရခြင်းကိုအချစ်ဟုခေါ်သည် (ဝေလင်း) ကောင်မလေး (ကျော်ထွဋ်ဆွေ၊ပိုက်ပိုက်)
YEAH (Club Mix )
မိန်းမချောလေးသူ (မ, snowwhitelay)
လေးဖြူ ၊ စာမျက်နှာ ၁၅
ဒးမင်စဿ႘ ( ဒေဝ႘ )
ဘဝအဲဗှေ်မွဲရ သွဟ်ဟွံဒး ( ဂ႘တ )
ဟွံကေတ်တှေ်လဵ အခေါင်နွံမံင်မဏီတှေ် ဗ္စိုပ်မိဟံသာ
စာမျက်နှာ ၁၅ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ (မယုံနိုင်ဘူး) ငါရဲ့အနား
(အရူံးပေးထားတယ် BLOCK HOLD) စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ နော်အပြစ်
Cline Dion (တိုက်တန်းနစ်)
ရင်ထဲက ( ဘန်နီဖြိုး )
100တန် ( လွှမ်းပိုင် )
happy birthday ( Golf )း
မင်းနားမှာနေချင်တယ် ( MHL & Air Air )
ယုံကြည်ပေးပါ ( ထက်ယံ )
( အောင်ရဲထိုက် & MC Bay Gyi )
let do it ( လွှမ်းပိုင် )
Charice Telephone အချစ်စစ်
1500 တေးဆို စန္ဒီ
ဆရာမ ဆုလဒ် ဒုတိယအကြိမ် ( ဘန်နီဖြိုး )
Don't go ( ရဲရင့်အောင် )
My Respect ( လွှမ်းပိုင် ) 2012 ( ဇေရဲ ၊ ယံယံ )
Whoot ( Mc - Zay ye',Bay Gyi ,Yan Yan )
ဗုဒ္ဒံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ-ကျော်စွာ
နောက်ထပ်တွေ့ချင်တယ် ( တေးဆို စန္ဒီ )
နင်မလိုချင်လည်း(MoeZ and san di myit lwin)
အွန်လိုင်းချစ်သူ(ဆိုတေး) ပြန်လာခဲ့ပါ (ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း)
ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ပျံဝဲ (အာဇာနည် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း)
bunny phyo သီချင်း ၁၅ပုဒ်
အိမ်လွမ်းသူဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း
ဟာလေလုယာ ( joseph ) တစ်စိမ်းဆန်(ရှိုးလေး)
ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါ အမှတ်တရနေ့(Mc Ye' Ye')
ဇာတ်သိမ်းခန်း (ကိကိ၊ဘန်နီဖြိုး) kg ma lay (yair yint aung)
South east asia rap (jouck jack)
မဟုတ်ရပါဘူး (ရဲလေး၊ထိန်ဝင်း) နှမျောတယ် (Dဖြိုး)
Jay Chou(Simple Love) ကာရံမဲ့အချိန်များ သူငယ်ချင်း အချစ်တဲ့လား အချစ်ဆုံးသို့ 
ကြွေပါစေ ( R ဇာနည် )
ခန္ဓသုတ် ပရိပ်တန်ခိုး သတိရညနေခင်း(MC zayye&yelay&KH$)
my home paradise မင်းတစ်ယောက်ကိုဘဲ
ဆိုတေး happy valentine day မဟာဆန်သူ
L O V E kg ma lay (ရဲရင့်အောင်)
မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ်-( သြရသ )
အချစ်တဲ့လား is this love(ထူးအယ်လင်း)
ကိုယ့်အနားရှိစေချင့်မ...ရယ်(bone+)
့ အဖြူရောင်သတို့သမီး (ခွန်)
့ ကိုး​​ယောက်မြောက်ချစ်သူ - အီနို့Boulvard of Broken Dreams(Green day) သိပ်ချစ်လို့ပါ-ကျော်စွာ
ငါမင်းကို မုန်း ... ချစ်တယ်
သို့မ (သားသား)
အချစ်တွေနဲ့( သားသား ) အရင်လို ( သားသား )
ဒါပေမဲ့ ( သားသား )
(လွယ်လွယ်လေး) အလွမ်းသင့်ပန်းချီ(ရတနာမိုင်) Another ( လွှမ်းပိုင် )
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ချစ်နေမယ်(ထူးအောင်) မ ရင်ထဲကနေရာလေတခု(Bransaing's) တည်ငြိမ်သူ(ဒီရေတိုး) ရှိသည်ဖြစ်သည်ချစ်သည်
latin girl -ဆို Justinbieber
(သီချင်းအမည် - စကားလေးတစ်ခွန်း)
( တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ )
တေးဆို.။ မနော( တစ်ခြမ်းပဲ့..ည)
အစတည်းကမတွေ့ကြရင်-သီဆိုသူ.နောင်ကြီး (Younger Family)
I never forget you(အာဖြိုးနဲ့နေဇော်ထက်)
ကိုယ်ရံတော် ( ရွှေရည်ဖြိုးမောင် )ု
မင်းသိလာမယ် တေးဆို ကျော်သီဟ
။။ ဟုတ်လို့လား ။။
တေးဆို -ဆိုတေး မီးအိမ်ရှင်
အောင်လရဲ့*အားလုံးငါ့ထက်သာ*
(ကိုဝ်တဲုအာ) တေးဆိုးက (အဂ္ဂ)
ဘယ်တော့မှမမေ့ ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ ပျံဝဲ အနှိုင်းမဲ့ ဆည်းလည်းသံ အမှတ်တရညနေခင်း
မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ မေခလာ-ဟဲလေး (ချစ်သူ ) တေးဆို = ရိန်မိုး
ကန်တင်းထဲက Queen Lecture (အရိုး)
မင်းနဲ့ နီးဖို့ (Joker&Virus)
Angle ( လွှမ်းပိုင် )
မင်းကိုလဲချစ်နေမိ ( လွှမ်းပိုင် )
ဒီ့ထက် ( လွှမ်းပိုင်၊ R.G )
ဒီ့ထက် Remix ( လွှမ်းပိုင်၊ R.G )
Happy Valentine Day (ဆိုတေး)
´နှလုံးသွေးများ ရပ်တန့်သွားပါစေ ချစ်နေမယ်´ ´ရှိသည်ဖြစ်သည်ချစ်သည်
့ ထပ်တူညီအချစ်(MHL & jenny)
့ ပျော်ပါစေ ( စန္ဒီမြင့်လွင် )
့ ( ညီမလေး)
့ ( E-mail My Heart )
့ ( အခုဘဝမှာ )
့မှား တဲ့ အ ချစ် (ပြည့် စုံ)
ထိုင်းသီချင်းလေးပါ( ဝသုန် )
့Every time (Britney Spears)
ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲ (တေးဆို ချမ်းချမ်း )
mmflashsongs မှ flashsongs များကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးနေသောဝါသနာရှင်များအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း Prev: သီချင်းစာမျက်နာ ၄Next: swishmax4ထည်းကို effect တွေ component တွေ ဘယ်လိုထည့်မယ် မေးထားသူများအတွက်
133 CommentsChronological Reverse Threaded
naancih wrote on Oct 8, '11
နမ်း အရမ်း ကြိုက် တဲံ သ ချင်း တွေ စာမျက်နှာ5မှာ တွေ့ လို့ ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်
tawtharflashsongs wrote on Oct 9, '11
အစာသွပ်စကား ၇ှာမတွေ့လို့ ဘယ်စာမျက်နှာထည့်ထားလဲလို့
htet20 wrote on Oct 12, '11
baby i love you သီချင်းမတွေ့လို့ ဘယ်စာမျက်နှာမှာ ထည့်ထားလဲ
swanswan9 wrote on Oct 16, '11
http://api.ning.com/files/GzNQwAMTtQhi4uovbASxEP5-WvevmfqE7oWEV8kEQQGuksyxhP2Gk5ESdzMSChhI2*2QN2ERtrB12s2aw20j9KVurnkHo*av/sandi1500.swf1500 တေးဆို စန္ဒီ
swanswan9 wrote on Oct 20, '11
http://api.ning.com/files/ahqNxqbrk3AnCQktskIdyRszcr2nBw5A9q12kUr*AhfqcVC*ucV56sh*bk00LuDFpB4ZPPbexu3n3aJpG7irFkg0ZSXMFeUv/AchitnetAlwan.swfအချစ်နဲ့အလွမ်း တေးဆို ၀ိုင်းစု
tissuelife wrote on Oct 23, '11
http://api.ning.com/files/1nGisdBlcZZ3S2evWdALRgDUJB9KYa9az7OABi*fg6TXsGV5zJYIdMM2BonhMhQrfodpTytuL-U6Ob1OTjCPnevZEJ44lDgH/Missyou.swfခေါက်ပစ်လိုက် တေးဆို မိန်းကလေး
tissuelife wrote on Oct 23, '11, edited on Oct 25, '11
http://api.ning.com/files/1nGisdBlcZZ3S2evWdALRgDUJB9KYa9az7OABi*fg6TXsGV5zJYIdMM2BonhMhQrfodpTytuL-U6Ob1OTjCPnevZEJ44lDgH/Missyou.swf“ဆူး” တေးဆို ယောင်္ကျားလေး...
tissuelife wrote on Oct 25, '11
အစ်ကိုထွန်းရေ...ဒီသီချင်းက ဆောင်းဦးလှိုင်ဆိုထားတဲ့ အပိုဆု သီချင်းလေးပါ....တင်ပေးပါဦးနော်http://api.ning.com/files/FyLL0CPWMknml6gBNXpVvdZs4Ieuh*FXemoWTW0CbrK52uqGEGCEze1fTfMtGPR*7ywGTBMnKvTeLIDI2rjqUMsOPDzCK5w*/aposu.swf
mmflashsongs wrote on Oct 27, '11
tissuelife ရေ သီချင်းလင့်တွေကို home page ရဲ့ comment မှာထားပေးပါနော် နောက်တခါ ဒီမှာမထားပါနဲ့ Comment deleted at the request of the thread owner.
rainloverlay wrote on Nov 1, '11
kyawshwelin99 wrote on Nov 3, '11
naythurain07 wrote on Nov 7, '11
ကောင်းကောင်းအခုထွက်တဲ့ ကောင်းကင်ကလူ အခွေထဲက သူငယ်ချင်းအတွက် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပို့ပေးပါလား........
thetko609 wrote on Nov 7, '11
magicmyosar wrote on Nov 11, '11
everonlinejoker wrote on Nov 12, '11
ကူညီပါဥိးဗျာ.. အပြုံးလေး ဆိုတာသီချင်းနာမည်မှားတင်လိုက်မိတာဗျ..အစ်ကို အဲ့ဒါကို ကြယ်ကြွေကောင်းကင် လို့ ပြန်ပြောင်းပေးလို့ ရမလားဗျာ....အားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ...
mmflashsongs wrote on Nov 13, '11
joker ရေ ပြင်ပြီးပြီနော် reply
everonlinejoker wrote on Nov 13, '11
everonlinejoker wrote on Nov 14, '11
effect လေးတစ်ခုလောက်တင်ပေးပါလားဗျာ...အစ်ကိုလုပ်နေကျလေ..ပုံပေါ်ထောက်လောက်ရင် ပုံကကြည်သွားတယ်..ဘေးကိုဖယ်လိုက်ရင် ..ပုံက ၀ါးသွားရော ...အဲ့ဒါလေး တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ဗျာ
mmflashsongs wrote on Nov 15, '11
joker ရေ ဆိုက်မျက်နာစာမှာတင်ထားတဲ့ mouse blur ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ ညီတောင်းတာအဲဒါပါပဲနောက်လိုချင်တာရှိရင်လည်း www.mm-flashsongs.com ရဲ့ မေးမြန်းဖြေကြားချက် အခန်းမှာတင်ပေးထားပါတယ် သွားကြည့်လိုက်ပါ နော် reply
everonlinejoker wrote on Nov 15, '11
အစ်ကို ဟုတ်လို့ လား သီချင်းလေး ပို့ ထားတယ်ဗျ တင်ပေးပါဦးဗျာ ..သူငယ်ချင်းကိုပြချင်လို့ ပါ...ကျေးဇူးပါ...
ရွှေအိမ်မက် သီချင်းလေးလဲ တင်ပေးပါဦးနော် အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာလေးပါ..ကျေးဇူးပါ...
eaindra7 wrote on Nov 22, '11
သီချင်းလေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်နော်.......... ဒွိဟသီချင်းလေးလည်းတင်ထားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာမျက်နှာ(၅) ကသီချင်းလေးတွေအကောင်းဆုံးပါပဲ........ Bobby Soxerရဲ့ ရင်ခုန်သံမပြောင်းလဲကြေးသီချင်းလေးတင်ပေးပါရှင် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်............
scofieldsal6 wrote on Nov 23, '11
maungmaunglaypar wrote on Nov 24, '11
အဲ့ဒီလိုတင်တာက ဘယ်လိုတင်တာလဲ ပြောပြပါလားး ကျနော်လည်း လုပ်ချင်လို့ ပါ reply
minponenya wrote on Dec 2, '11
လာလည်သွားပါတယ်ကဗျာချစ်သူများ ဆိုဒ်သို့လာလည်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
zinyeko12 wrote on Dec 2, '11
sailaokhur wrote on Dec 3, '11
amonemyotaw wrote on Dec 6, '11
raylife wrote on Dec 10, '11
d songs tway ko down down loat lo ya lr??ya yin bae lo loat lo ya lae ti chin par tal...thzz...
mp3 lay shi yin *ya min* ye @ mar po pay say chin pr tal..khinyaminnge@gmail.comthzzz..alot
nansulay wrote on Dec 15, '11
menoboy wrote on Jan 1, edited on Jan 2
khun cho ကိုချစ်နေမိပြီ.........................
menoboy wrote on Jan 1
naykha20 wrote on Jan 3
အကိုရေ ညီလဲ သီချင်းလုပ်ချင်တယ် ဒါပေမယ့်မလုပ်တတ်လို့ သီချင်းလုပ်နည်းကို မေးလ်ထဲက ပို့ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် naykha20@gmail.com
0815aung wrote on Jan 7
0815aung wrote on Jan 7, edited on Jan 7
ဘန်နီဖြိုး ရဲ့ ချစ်တယ်ဟုတ် ဆိုတဲ့ သီချင်း ဘယ်နားမှာလဲ
nightstalker478 wrote on Jan 8
ရေ ကျွန်တော် flash song မလုပ်တက်လို့ ပြောပြပါလား ..............ကျွန်တော့် account ထဲကိုမေးပို့ပေးထားပါလား please..........drowranger478@gmail.com
livego wrote on Jan 14
happyboy410 wrote on Jan 15
sithum85 wrote on Jan 20
flash song လုပ်တပ်ချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ မသိဘူးနော် လုပ်နည်းသိချင်တယ် မေးထဲကို ပို့ပေးထားပါနော် waithet5@gmail.com ကနေစောက်နေမယ်နော် လုပ်နည်း အခက်လောက်ပို့ပေးထားပါနော်
matesarlay wrote on Jan 21
ခင်လို.၇ပါသည် godtheory.mario ထဲဝင်ခဲပါ
harrysky wrote on Jan 22
bae loe download lote ya tal lae pyaw per lar byar ma ti loe per .......help .me
harrysky wrote on Jan 23
loe chin tal song shi loe per download bae loe lote ter lae pyaw per lar byar ....
menoboy96 wrote on Jan 23
godtheory.mario ka gade11 /ahint min nyi/ phyat par thi
assvampire wrote on Jan 24
matesarlay ငါ့ကညီညီဦး ကွ
yinglurnkham wrote on Jan 30
yinglurnkham@gmail.comJan 24matesarlay ငါ့ကညီညီဦး ကွ
aungwaiyanphyo wrote on Jan 31
99satan9 wrote on Jan 31
99satan9 wrote on Feb 3
archaegirl wrote on Feb 3
၀ိုင်းစုရဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ သီချင်းတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
moesetlinhtet wrote on Feb 12
ကျေးဇူးပါ ဗျာ သီချင်လေးတွေတော်တော်စုံအောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ပါ
wysoe wrote on Feb 13
ကိုလေးဖြူ ရဲ့ နှလုံးသွေးများရပ်တန့်သွားပါစေ ချစ်မယ် တင်ပေးပါလား (ကိုဂျက်မြသောင်းရဲ့ သီချင်းပါ)
mmflashsongm wrote on Feb 13
That Paing Htwe wrote on Apilr21
bachelorlove wrote on Feb 20
Iron Cross - song myarr ah lo shi the
Iron Cross (Myanmar)sharr payy parr
bachelorlove wrote on Feb 21
လွှမ်းပိုင်ရဲ့ ထာဝရသူငယ်ချင်း ဆိုတာလေး
joonsaw wrote on Feb 21
shanmalay1994 wrote on Mar 5
စာမျက်နှာလေး မှာ ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ သီချင်း တွေ အများကြီးပါတယ် ရှင့်။ ပြီးတော့ ဒီစာမျက်နှာလေး မှာ Download Songs တွေ လုပ် ပေး လို့ ရမလား မသိဘူး တောင်းဆိုပါတယ် ရှင်
pyuewaimonpyue wrote on Mar 7
ဟုတ်.... ကျေးဇူးပါ.... reply
IMP ရဲ့ ဖန်သားနန်းတော်လေးမတွေ့လို့ ရှာပေးစေချင်ပါတယ်
aeistine wrote on Mar 13
myatthirithant wrote on Mar 16
တော်တော ရှုပ်တဲ့ သီချင်း ဘာမှ ထပ်ဖွင့်လို့ မရဘူး သူ့ အသံ ကို မကြားချင်လဲ ကြားနေရတယ် Comment deleted at the request of the author.
hmhtal wrote on Mar 19, edited on Mar 19
what the song...but sometime is fine for life...from raincloudstory@gmail.com
zinmaraungchitchit wrote on Mar 21
kyawee wrote on Apr 1
kyilzin wrote on Apr 12
ponysm22 wrote on Apr 18
အရမ်းကောင်းပါတယ် နောက်ထပ်လဲနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးတွေတင်ပေးဦးနော် reply
boomboomclup wrote on Apr 20
yeeyint wrote on Apr 20
ကိုထွန်းရေ ကျွန်တော့သီချင်းလေး မတင်ရသေးဘူးနော်......မင်းမရှိတဲ့အခါသီချင်းလေ
boomboomclup wrote on Apr 22
linepon wrote on Apr 23
myomin2020 wrote on Apr 29
linyarzar wrote on May 3
yehtwe299 wrote on May 4
lwinooyan wrote on May 4
ကောင်းကောင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း အတွက် သီချင်း လေးတင်ပေးစေချင် တယ်ဗျာ အရမ်းကြိုက်လို့ ပါ ။။။။။။။။။။
myatthu123456 wrote on May 9
kkhant121 wrote on May 11
punklay1500 wrote on May 15
fgst wrote on May 19
အခုလိုမျိုးလေးတွေကိုတွေ့ ရလို့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် ~_*
nainglin447 wrote on May 23
nayzawwynn21 wrote on May 23
အဝေရောက်ချစ်သူ သီချင်းက တ၀က်ပဲ့ပါလို့ ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား+++.
kophyo34 wrote on Jun 1
chankyiphyu wrote on Jun 1
thetmay wrote on Jun 15
သီချင်းလေးကိုဘယ်လို download ရမလဲဟင် ပြောပြပေးပါလား သီချင်းလေးနားထောင်ရလို့ very thank သီချင်းအသစ်လေးတွေရှိရင်လဲထက်တင်ပေးအုံးနော်
hahlay1996 wrote on Jun 17
ကျွန်တော်ကိုflash song ရေးနည်း တင်နည်း တွေပို.လိုက်ပါ hahlay1996@gmail.comwww.hahlay1996.blogspot.com
zawpaing1990 wrote on Jun 17
ရိုးရှင်းသောဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်မှူ့ ဆို့ တဲ့တချင်းလေတင်ပေးပါအုံး ကြေးဇူးတင်ပါတယ်
heartbrokenowl wrote on Jun 23
kkokaunglay wrote on Jun 26
ကျနော်ကို ရသနဲ.ဂျောက်ဂျက်တို.ဆိုထားတဲ. စိတ်ကူးရင် အိမ်မက်ကမ္ဘာငယ် သီချင်းလေးတင်ပေးပါ
loverapple wrote on Jul 5
ရိုးရိုးလေးနဲ့လှတဲ့ “ မ ” သီချင်းကိုကြိုက်တယ်
ရိုးရိုးလေးနဲ့လှတဲ့ “ မ ” သီချင်းကြိုက်တယ်
palaungma wrote on Jul 9
nayylayy93 wrote on Jul 9
http://api.ning.com/files/3d2DS5ly1-BlD1Kk67ktf*Y9uAg4irW6YFJgENOMLjmP77Ur-ZHijgS2I3J-Fx9Fq-j4wmmAPh3*28igg5Ekffvh3bkZCnEz/ayuboy.swfနောက်ဆုံးဖူးစာ-Netkhat,Killer,Ko Htet အဲဒီသီချင်းလေးမရောက်သေးဘူးလား
hongsarmon wrote on Jul 14
nightprince279 wrote on Jul 18
ယုန်လေးရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ သီချင်းလေးတင်ပေးပါလား....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
zinkohein wrote on Jul 20
badin အဆိုတော်လား၊ သို့မဟုတ် အဆိုတော်ဖြစ်ချင်သလား၊ သီးချင်းတွေစုတာပဲ၊ သီးချင်းနားထောင်ရတာနဲ့ပျော်နေမှာပေါ့နော်..
tamoeout2015 wrote on Jul 25
လေးနက်ဆိုထားတဲ့ အလွမ်းနဲ့ဒီဇင်ဘာ သီချင်းလေးတင်ပေးပါလား
musicgipsy wrote on Jul 31
အရမ်းပျော်နေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဒီဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် "ကောင်းကောင်း" သီချင်းလေးတွေများများတင်ပေးပါနော် အနန္ဒကျေးဇူးပါ............ :)
onlineflashchitthu wrote on Aug 2
zinkoko001 wrote on Aug 9
sheinkhanthuzin wrote on Aug 15
sheinkhanthuzin wrote on Aug 17
dogkaunggyi wrote on Aug 19
dogkaunggyiI like songs reply
mmchitsisflash wrote today at 7:58 AM
ye' lay (မိုးသီချင်း)ကဘယ်နားမှာရှိလဲ....သိခွင့်ရှိမလာ
mmchitsisflash wrote today at 7:59 AM
netsoelay. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.